मेहनती ‘ भर्सटाइल ’ पौडीवाज « KhelkudNews.com
मेहनती ‘ भर्सटाइल ’ पौडीवाज
Published On : 18 July, 2019 7:40 pm
आठ वर्ष अघि, अर्थात् सन् २०११ को कुरा हो । बुद्धनगरकी सानु राजभण्डारीले छोरालाई त्रिपुरेश्वरमा पौडी खेलाउन लाने गर्थिन् । ११ वर्षीय अनुभव सुब्बाले त्यही पौडी खेल्न सिके । दशरथ रङ्गशालाको हातामा रहेको त्यही पौडी परिसरमा पौडी प्रशिक्षक रविन कुमार पौडेलको आँखा प¥यो,अनुभवमाथि । रविनले व्यवस्थित र प्रतियोगितात्मक स्वरूपमा पौडी खेल्न प्रेरित गरे पछि उनले सुरु गरे पौडी खेलको नयाँ यात्रा । त्यहीँ राजु अधिकारीबाट उनले पौडी सिक्न थाले । यो सुरुवातका आठ वर्ष पछि तीनै अनुभव अहिले नेपालका परिचित पौडीवाज बनेका छन् । सुरुमा “ब्याकस्ट्रोकर”को छवि बनाएका उनी तीन वर्ष यता स्प्रीन्ट बटलफ्लाइमा आफूलाई केन्द्रित गरेका छन् । सुरुमा ब्याक र अहिले फ्लाइमा रहेका कारण उनी व्यक्तिगत मेड्लीमा पनि पौडने गरेका छन् ।
उनै अनुभव ३० जुलाई देखि सेप्टेम्बर ३ सम्म हुने प्री ओलम्पिक प्रशिक्षणका लागि जापान जाँदै छन् । त्यहाँ उनले जापान पौडी महासङ्घकै प्रशिक्षकबाट प्रशिक्षक पाउने छन् । त्यहाँका क्षेत्रीय टोलीसँग उनीहरूले प्रशिक्षण गर्ने छन् । यस कुराले उनी उत्साहित पनि छन् । त्यसो त उनको यो भन्दा अघि पनि वैदेशिक प्रशिक्षण नपाएका होइनन् । १२ औ साग अघि एक महिने प्रशिक्षणका क्रममा उनले दुई सेकेन्ड समय घटाउन सकेका थिए । यस कारण उनी अहिले पनि आफूमा केही न केही सुधार हुनेमा पूर्ण आशावादी छन् । यसै कारण उत्साहित पनि ।
५० मि. बटरफ्लाईमा २७.५३से, १०० मि.बटरफ्लाइमा १मि००.४३ से,१०० मि फ्रिस्टाइलमा ५५.८८ से र २०० मि मेड्लीमा २ मि २३ से उनको उत्कृष्ट समय हो । यो समय दक्षिण एसियाली माझ पनि उत्कृष्ट त होइन , तर, यस प्रशिक्षणले कहीँ दिन्छ भन्ने प्रस्ट छ । अबको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा रिले स्पर्धामा नेपाल पनि पदकको दाबेदार हो । उनी ४ सय मिटर फ्रिस्टाइल र मेड्लीमा दुवैमा समावेश हुने छन् । उनले यहाँ गर्ने सुधारका कारण नेपाल दक्षिण एसियामा पदक प्राप्त गर्ने टोलीको रूपमा रहन पनि सक्छ ।
उनीबाट यस कारण पनि आशा गर्न सकिन्छ की उनले छोटो समयमा भिन्न फड्को मार्दै आएका छन् । सन् २०११ मा पौडी खेल्न सुरु गरेका उनी २०१३ मा प्रतियोगितामा समावेश हुन थाली सकेका थिए । सन् २०१५ मा पहिलो पदक जिते । २०१६ को दक्षिण एसियाली खेलकुदसम्म उनी ब्याकस्ट्रोकमा केन्द्रित थिए । त्यसै साग खेल पछि उनको पहिलो रोजाइको स्ट्रोक बटरफ्लाइ बन्यो । जहाँ उनले एकाएक प्रगति गरे । १ सय मिटर फ्लाइका नेपालका शीर्ष बरियताका खेलाडी बनेका छन् । उनको निरन्तर मिहेनत र परिश्रम गर्ने कारणले नै उनी बाट धेरै आशा गरिएको हो । बिहान नेशनल स्पोर्ट्स ट्रेनिङ सेन्टर
प्रशिक्षक वाङगदेल लामाबाट व्यक्तिगत प्रशिक्षक लिने उनी बेलुका कालोपुलमा राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणमा क्याम्पमा संलग्न हुने छन् । जहाँ नयना शाक्यले प्रशिक्षण दिइरहेकी छिन् ।
क्याम्पीयन एकेडेमीमा बाल्यकाल बिताएका उनले डिएभीबाट विद्यालय तहको पढाइ पुरा गरे । यस पछि युलियन्स स्कुलबाट प्लस टु गर्दै गरेका १७ बर्से अनुभव जहाँ पुगे उनको एउटा छवि भने राखेरै छाडे । मेहनती र मिलनसारको रूपमा एउटा छवि बनाएका यी युवाका केही चाहना छन् । नियमित प्रशिक्षण, राम्रो पुल, लेन रोप सहितको सुविधा । उनले चाहे जस्तो त नेपालमा होला या नहोला, तर एउटा कुरा पक्कै हो, “ एक महिना भन्दा बढीको जापान बसाइमा अनुभवले आफूमा धेरै सुधार गर्ने छन् । जसरी सुरुको एक महिनाको वैदेशिक प्रशिक्षकले सुधार दियो, त्यसै किसिमको सुधार यो प्रशिक्षणले पनि दिने छ । ” उनले कत्ति सफलता पाउँछन् ? अन्तर्राष्ट्रिय तहमा कत्ति पदक पाउँछन् या पाउँदैनन् ? त्यो त उनको मात्र विषय होइन ,तत्कालीन समय र अन्य वातावरण पनि कारण हुने छन् । के साँचो हो भने एउटा एथलेटमा हुनु पर्ने गुणले अनुभव लगभग पूर्ण छन् । मेहनती , प्रशिक्षणमा केन्द्रित र त्यत्तिकै खेल भावनाले प्रेरित ।